16 / 05 / 2021 03 / 06 / 2021 ခရစ် Wharfe 744 Views စာ0မှတ်ချက် 4709 တားမြစ်ထားသောစင်္ကြံ, ၇၆၃၈၆ HogwartPolyjuice Potion မှားယွင်းမှု, ၇၆၃၈၆ Hogwarts fluffy တှေ့ဆုံ, ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း, ဟယ်ရီပေါ်တာ, ဟယ်ရီပေါ်တာ ၂၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်, Hermione granger, Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, LEGO.com, reviews, Ron Weasley, အဆိုပါ LEGO Group
၇၆၃၈၆ Hogwarts: fluffy တှေ့ဆုံ အလွန်တိကျတဲ့ recreates classic Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ ရောထွေးရလဒ်များနှင့်အတူ - ဆောင်ပုဒ်ရဲ့ 20 နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အဘို့အသတ်မှတ်။
သင်၏စိတ်ကို (၂၀၀၁) သို့ပြန်သွားပါ (သို့မဟုတ်၊ ထိုနှစ်ကိုမှတ်မိရန်သင်ငယ်လွန်းပါကဂူဂဲလ်ကို နှိပ်၍ သင်၏လူငယ်များကိုအခြားသူများရှေ့တွင်မခွဲမခွာရပ်တန့်ပါ။ )၊ Lego Group သည်၎င်း၏ဒုတိယအကြိမ်လိုင်စင်ရသည့်အခင်းအကျင်းကိုသာပွဲ ဦး ထွက်အနေဖြင့်ပြင်ဆင်နေသည် ဟယ်ရီပေါ်တာ.
အနှစ်နှစ်ဆယ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကိုစက်ဝိုင်းပုံသဏ္thatာန်နဲ့ပြည့်စုံလာပြီးသူတို့တွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အရာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ် classic သူတို့ရဲ့အနှစ်သာရကိုဖြန့်ဖြူးခြင်းအားဖြင့်မော်ဒယ်များ - အမည်ရသူတို့ရဲ့ modular ပေမယ့်လည်းသူတို့ရဲ့မွေးရာပါ Lego အချို့သောသိမ်မွေ့သောနည်းလမ်းများရှိသော်လည်းအသစ်တဖန်ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်သောအစီအစဉ်တွင်၎င်းသည်ဘိုးဘေးတို့အားချီးကျူးဂုဏ်ပြုခြင်းခံရသည်။
၇၆၃၈၆ Hogwarts: fluffy တှေ့ဆုံ စာတန်၏ထောင်ချောက်အထက်မှထောင်ချောက်ကိုစောင့်နေသည့်ခေါင်းနှစ်လုံးပါသောခွေးသုံးကောင်သည် ၄၇၀၉ Forbidden Corridor ၏ရူပဗေဒကိုယူပြီး၎င်းအမျိုးအစားကိုအလွန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်နိုင်သည်။ သို့သော် ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင်အနည်းငယ်သာခိုင်မာပုံရသည့်ဝန်းကျင်တစ်ခုသည် ၂၀၂၁ တွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်နိုင်မည်လော။
theme: ဟယ်ရီပေါ်တာ အမည်သတ်မှတ်မည် - ၇၆၃၈၆ Hogwarts: fluffy တှေ့ဆုံ ဖြန့်ချိ: ဇြန္လ 1, 2021
စျေးနှုန်း: £ 34.99 / $ 39.99 / € 39.99 အပိုင်းပိုင်း: 397 အသေးစားပုံများ: 4
အဆိုပါတည်ဆောက် startFluffy နှင့်အတူ, နှင့်ခေါင်းနှစ်လုံးသုံးခွေးဖို့ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုလုံးအဖြစ်အစုံ၏တကယ်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့ကအလုပ်လုပ်သည် - artအုတ် -based တည်ဆောက်ထားခြေထောက်အားဖြင့်ကမ်းလှမ်း iculation; ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အရွယ်အစားနှင့်အသေးစိတ်ကိုကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ခေါင်းများအကြား - သို့သော်မရှောင်လွှဲနိုင်သောအလျှော့ပေးလိုက်လျောမှုများနှင့်ထူးဆန်းသောဒီဇိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်များက၎င်းအားလျော့နည်းစေသည်။
အရောင်ရင့်ရောင်မီးခိုးရောင်ဘောလုံးပူးတွဲခံစက်များသည်ဝေဖန်ရန်ထင်ရှားသောအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်ခေါင်းသုံးလုံးကို ဖြတ်၍ ပုံနှိပ်ခြင်းသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးနေသည်။ ခေါင်းတစ်လုံး၊ အိပ်တစ်ဝက်အိပ်စက်ခြင်းနှင့်တစ်လုံးတည်းအိပ်ပျော်ခြင်းတို့ကပြသမှုတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ Fluffy ကိုတစ်လမ်းသွားလှည့်ပါ။ သူနိုးနိုးကြားကြားရှိပြီးအဆင်သင့်ဖြစ်မည်။ သူ့ကို 180 ဒီဂရီလည်နှင့်သူအစာရှောင်အိပ်ပျော်နေသော။
သို့သော်၎င်းသည်တိတ်ဆိတ်စွာကျန်ရှိနေသည့်တတိယထပ်စင်္ကြံ၏အခြေအနေထက် ကျော်လွန်၍ ထူးဆန်းနေပုံရသည်။ ထို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပြဇာတ်ဇာတ်ကွက်များတွင် pooch ကိုထိုကန့်သတ်နေရာသို့ထည့်သွင်းခြင်းမပါဝင်ပါ။ သီးခြားအပြန်အလှန်လဲလှယ်နိုင်သောခေါင်းများကစျေးနှုန်းကိုအနည်းငယ်နည်းနည်းမြင့်တက်စေသည့်တိုင်များစွာပိုမိုကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
နောက်တစ်ခါစောင်းသည်၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောတည်ဆောက်မှုဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့နှစ်ခုကြားရှိစည်းဝေးနှစ်ခုသည်တီထွင်ဖန်တီးမှုအများစုကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ၇၆၃၈၆ Hogwarts: fluffy တှေ့ဆုံ။ ဖွဲ့စည်းပုံသူ့ဟာသူ, p နေစဉ်art4709 Forbidden Corridor ၏အဆင်အပြင်သည် Hogw ၏အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်သည်artတောင်မှအပါအဝင် - ဒီလှိုင်းထဲမှာအစုံ ၇၆၃၈၆ Hogwarts: Polyjuice Potion မှားယွင်းမှုဒီ set က၎င်း၏တစ်ခုလုံးကိုအတွင်းပိုင်းကိုဖြတ်ပြီးစီမံခန့်ခွဲသည်ထက်၎င်း၏တစ်ခုတည်းအခန်းသို့ပိုမိုအသေးစိတ်ထုပ်ပိုး။
အရောင်များ, p ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ကြသည်artလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောမီးခိုးရောင် (စာတန်၏ထောင်ချောက်သည်စကြာ ၀ inာအတွင်းရှိအခြားနေရာများတွင် ဦး ဆောင်သင့်သော်လည်း) ၇၆၃၈၆ Hogwarts: fluffy တှေ့ဆုံ.
တကယ်တော့ဒါဟာတကယ်ဘယ်မှာ departDevil's Snare သည် Fluffffy နှင့်တတိယထပ်စင်္ကြံတို့နှင့်ကပ်လျက်ရှိသောကြောင့် ၄၇၀၉ Forbidden Corridor ၏ layout မှပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောမူကိုဖြုတ်ချလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့်ခွေးတစ်ကောင်၏အောက်ခြေရှိလူစားခန်းသည်သေတ္တာ၏ရှေ့မျက်နှာပြင်ရှိပုံမှန်ပုံစံဖြင့်မည်သည့်နေရာတွင်မျှရောက်ရှိနေသည်မဟုတ်ဘဲအောက်ရှိအခန်းနှစ်ခုကိုရွေ့လျားနေခြင်းကသင့်အားအလွန်အမင်းခေါင်မိုးတစ်ခုနှင့်အတူထွက်ခွာသွားစေသည်။
ထို layout နှစ်ခုလုံးသည်အကောင်းဆုံးမဟုတ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်၎င်းကိုနှစ်ခုလုံးနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်လိုအပ်သည် ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း နှင့် ၇၆၃၈၆ Hogwarts: Polyjuice Potion မှားယွင်းမှု ကမ်းလှမ်းမှုရဲ့အရာအများစုကိုလုပ်ဖို့။
အိုး, သဲအစိမ်းရောင်ခေါင်မိုးကန်တော့ချွန်၏အတွင်းပိုင်းတွင်, အားလုံးအချိန်၏အနည်းကိန်းအဆိုးဆုံးစတစ်ကာနေရာချထားရှိပါတယ်။ ဒါရှိတယ်။
အနှစ် ၂၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်၏အသေးငယ်ဆုံးအစုံလိုပဲ၊ ၇၆၃၈၆ Hogwarts: fluffy တှေ့ဆုံ ကျွန်ုပ်တို့၏နာမည်ကောင်းဖြစ်သော Harry, Ron နှင့် Hermione တို့၏သုံးပုံတစ်ပုံကိုပြန်လည်ကျရောက်ပြီးနောက်ရွှေရောင် Hermione ကိုကောင်းမွန်စွာတိုင်းတာနိုင်သည်။ ဒီဇာတ်ကောင်ရွေးချယ်ပုံကဒီပုံမှာမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးအဓိပ္ပါယ်ရှိတာနဲ့ torsos မျိုးစုံ - ဟယ်ရီရဲ့ဝတ်ရုံကိုဒီမှာပိတ်ထားပေမယ့်ဖွင့်ထား ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း - ကြိုဆိုပါတယ်။
4706 Forbidden Corridor ကို ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ၂၃၈ ခုအတွက်ပေါင် ၂၄.၉၉ / ဒေါ်လာ ၂၉.၉၉ ဖြင့်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည် ၇၆၃၈၆ Hogwarts: fluffy တှေ့ဆုံ ပေါင် ၃၄.၉၉ / ဒေါ်လာ ၃၉.၉၉ ဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ အနှစ် ၂၀ အကြာတွင်ထိုတန်ဖိုးမှာတန်ဖိုး ၃၉၇ ခုဖြစ်သည်။ အစုံနှစ်ခုစလုံးတွင်ခေါင်းနှစ်လုံးပါသောခွေးသုံးမျိုးလုံးအတွက်ထူးခြားသောဒြပ်စင်များပါရှိသည်။ သို့သော်မူကွဲအသစ်သည်ထိုအရာ၏သေးငယ်သည့်ပမာဏကိုလည်းတိုးပွားစေသည်။ classic အစုံ
နှိုင်းယှဉ်မှုအရ၊ ဒီမှာစျေးနှုန်းအရပြောစရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ အထီးကျန်ဆန်တာတောင်မှသင်တက်ဖို့ခက်လွန်းလို့မခံစားရဘူး ၇၆၃၈၆ Hogwarts: fluffy တှေ့ဆုံ ရန်အဖော်အဖြစ် ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း။ (အမှန်စင်စစ်၊ ၎င်းသည်၎င်း၏အကောင်းဆုံးအခန်းကဏ္ is ဖြစ်သည်။ )
၇၆၃၈၆ Hogwarts: fluffy တှေ့ဆုံ Collectible Wizard ကဒ်နှစ်ခုပါ ၀ င်သည်။
အခြားနှစ်ခု Hogw နေစဉ်artဒီအနှစ် ၂၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်လှိုင်းမှာတပ်ဆင်ထားတာကတစ်ယောက်တည်းရပ်တည်နိုင်စွမ်းရှိတယ် ၇၆၃၈၆ Hogwarts: Polyjuice Potion မှားယွင်းမှုအခန်းတစ်ခန်းပဲရှိတယ်၊ ၇၆၃၈၆ Hogwarts: fluffy တှေ့ဆုံ စိတ်ပျက်ဖွယ်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်ချို့တဲ့ခံစားရသည်။
ဇာတ်ကြောင်းစီးဆင်းမှုနှင့်အမြင်အာရုံဖြင့်ထိတွေ့မှုနှစ်မျိုးလုံးအတွက်စံပြပုံစံသည်ထပ်ဆောင်းရန်လိုအပ်သည် ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း အနည်းဆုံးအနည်းဆုံးနှင့်အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော Fluffy - ကောင်းနေစဉ်articulated နှင့်အသိဥာဏ်ရှိစွာဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည့် - ဆွဲဆောင်မှုရှိသောဘောလုံးအဆစ်များနှင့်ထူးဆန်းသောပုံနှိပ်ခြင်းများကြောင့်ဖြစ်သည်။
p ဖြစ်လာတဲ့အခါart သည်အခြား Hogw နှင့်အတူပေါင်းစပ်ပိုကြီးတဲ့အရာ၏arts စုံတွေ၊ တန်ဖိုးကလိုက်လျောညီထွေမှုတိုးလာတာကြောင့်နှစ် ၂၀ မြောက်နှစ်ပတ်လည် Hogw ရဲ့အသုတ်အသစ်တစ်ခုကိုသင်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ကောက်ယူသင့်သည်။arts စုံ။ ကြောင်း modular ဦး စားပေးမှာတော့ ၇၆၃၈၆ Hogwarts: fluffy တှေ့ဆုံ အများအားဖြင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ခြေထောက်ပေါ်ရပ်ရန်မေ့နေသည်၊ ၎င်းသည်တစ်ကိုယ်တော်ထောက်ခံချက်ဖြစ်စေသည်။
LEGO Harry Potter ၇၆၃၈၉ Hogw တည်ဆောက်ရန်မည်မျှကြာမည်နည်းarts: fluffy တှေ့ဆုံ?
၇၆၃၈၆ Hogwarts: fluffy တှေ့ဆုံ မိနစ် ၄၀ ခန့်တွင်အတူတကွလာသည်။ ဖြူဖွေးနေပြီ၊ အိပ်မပျော်သည့်စတစ်ကာတစ်ခုရှိသော်လည်းအဓိကအဆောက်အအုံသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အခြေခံကျသည်။
LEGO Harry Potter 76387 Hogw တွင်မည်မျှအပိုင်းအစများရှိသနည်းarts: fluffy တှေ့ဆုံ?
၃၉၇ ကိုရှာမယ် ၇၆၃၈၆ Hogwarts: fluffy တှေ့ဆုံအဆိုပါ eponymous pooch သုံးခုထူးခြား - ပုံနှိပ်အကြီးအကဲများအပါအဝင်။
LEGO Harry Potter 76389 76387 Hogw သည်မည်မျှကြီးမားသည်arts: fluffy တှေ့ဆုံ?
box ရဲ့အရှေ့ဘက်မှာပုံနှိပ်ထားတဲ့ configuration မှာ၊ ၇၆၃၈၆ Hogwarts: fluffy တှေ့ဆုံ အလျား ၃၀ စင်တီမီတာ၊ အကျယ် ၁၉ စင်တီမီတာနှင့်အနက် ၇ cm အကျယ်ရှိသည်။
LEGO Harry Potter 76387 Hogw သည်မည်မျှကုန်ကျသနည်းarts: Fluffy Encounter ကုန်ကျစရိတ်?
၇၆၃၈၆ Hogwarts: fluffy တှေ့ဆုံ မှာဇွန်လ 1 ရက်နေ့တွင်ဖွင့်ပါလိမ့်မယ် LEGO.com နှင့် Lego စတိုးဆိုင်များနှင့်ယူကေတွင်ပေါင် ၃၄.၉၉၊ ယူအက်စ်တွင်ဒေါ်လာ ၃၉.၉၉ နှင့်ဥရောပတွင်ယူရို ၃၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချသည်။
← တစ်နေ့တာ၏အုတ်ပုံ: ပြင်းထန်သော
Lego Speed Champions ယခု LEGO.com တွင်စာရင်းဝင်နွေရာသီအစုံ →